Dayactirka Kombuyuutarka, Qalabka & Software - Cusbooneysiinta Kombiyuutarka
Caafimaadka & Madadaalada
Dukaameysi & Adeeg
Kumbuyuutarradu waxay u baahan yihiin cusbooneysiin joogto ah, dayactir, casriyeyn iyo mararka qaarkood dayactir sidoo kale.
Dayactirka joogtada ah ee kombiyuutarada waxaa loola jeedaa hubinta kumbuyuutarka inuu si fiican u shaqeynayo, ka takhalusida khaladaadka, xawaareynta, ilaalinta kumbuyuutarkaaga oo casriyeysan isla markaana gebi ahaanba la sugo. Maskaxda ku hay casriyaynta casriyeynta, kombuyuutarka wuxuu u baahan yahay casriyeyn joogto ah iyo casriyeyn. Tani waxay ka dhigan tahay, marba mar waa inaad cusboonaysiisaa softiweerka iyo qalabka kombiyuutarkaaga.
Waxaan ku siineynaa liis ay ku qoran yihiin xirfadlayaal kaa caawin kara dayactirka iyo hagaajinta kombiyuutarka.
Casriyeynta barnaamijka waxaa ka mid ah cusbooneysiinta antivirus, daaqadaha, qalabka warbaahinta, darawalada, iwm. lagu casriyeeyay softiweerka iyo qalabka ugu fiican wuxuu hubiyaa shaqeyn iyo nabadgelyo habboon.
In kasta oo shakhsiyaadka ay tixgeliyaan in laga takhaluso dhibaatooyinka ama ay khaladaadka iyagu iskiis u xaliyaan, laakiin waxaa lagu talinayaa in la shaqaaleeyo adeeg bixiye khabiir ku ah adeegga kombiyuutarka si loo hubiyo in wax walba ay si fiican u shaqeynayaan oo aad leedahay adeegyada ugu fiican.
Kombiyuutarrada Desktop & Laptop
Dayactirka, Casriyaynta, Cusbooneysiinta
Waa maxay Computer?
Kumbuyuutarku waa aalad loo adeegsado fulinta hawlo kala duwan. Kumbuyuutarrada waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan waxaana loo isticmaalaa inay qabtaan hawlo kala duwan oo gacan ka geysanaya badbaadinta waqtiga iyo lacagta. Waxaa jira barnaamijyo badan oo la heli karo oo gacan ka geysanaya habsami u socodka howlaha kala duwan.
Barnaamijka guud ahaan waxaa loo yaqaan codsiyo, kuwaas oo si toos ah u qabta shaqooyinka isla markaana ka dhigaya howlaha wax badan. Tani waxay maamulka ka dhigeysaa mid aad u fudud.
Raadi Bixiyeyaasha Kale Raadinta
liistada liiska Diiwaanka waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho liiska xirfadlayaal kaa caawinaya dayactirka qalabka kombiyuutarka iyo softiweerka. Waxay kaa caawin doonaan darawalada loo baahan yahay iyo softiweerka hubiya inuu si sax ah u shaqeeyo kumbuyuutarkaaga.
Liistadayada adeegga dayactirka kombiyuutarka waxaa ku jira xirfadlayaal maxalli ah iyo kuwo khadka tooska ah ka shaqeeya oo kaa caawin kara dhibaato kasta oo weyn ama yar oo kombuyuutarkaaga ah Kaliya kuma siin karaan la-talin laakiin sidoo kale waxay ku siinayaan dayactirka iyo hagaajinta adeegyada iyada oo ku saleysan baahiyahaaga.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku kala soocdo bixiyeyaasha adeegga gobol walba waxaadna u adeegsan kartaa xulashooyinka inaad ku kireysato shirkadaha ganacsi ee dayactirka kombuyuutarrada saxda ah ee deegaankaaga.
Marka ay jirto arrin ku saabsan qalabka kombiyuutarka waxay dhibaato u keeni doontaa darawalnimada iyo softiweerka. Ku darista qalabka cusub, softiweeriyada sida weyn ee adag, kaararka garaafka ama kaararka xusuusta si loo dardar galiyo kombiyuutarada marka cusbooneysiinta qalabka gacanta lagu rakibo qaar ka mid ah barnaamijyada casriga ah.
Haysashada kumbuyuutarkaaga oo lagu cusbooneysiiyo softiweerkii iyo qalabkii ugu dambeeyay wuxuu noqday daruuri, gaar ahaan markii wax waliba helaan cusbooneysiin. Helitaanka qalab cusub oo casriyeysan iyo softiweer sida kaararka sawirada, darawal adag, daaqadaha iwm.
Kordhinta Barnaamijka Kombuyuutarka
© 2020 Dhammaan xuquuq dhowran,Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah & Shuruudaha